Shirkadaha Favori iyo Al-Bayrak ee maamulada Garoonka iyo Dekada Muqdisho oo diiday in lala xisaabtamo | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Shirkadaha Favori iyo Al-Bayrak ee maamulada Garoonka iyo Dekada Muqdisho oo diiday in lala xisaabtamo
Hanti-dhowrka Guud ee Qaranka Soomaaliya Dr. Nuur Faarax Jimcaale Faarax , oo ka hor hadlay Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in Shirkadaha Favori iyo Al-Bayrak ee maamulada garoonka Diyaaradaha iyo Dakadda Muqdisho ay diideen in lala xisaabtamo.
Waxa uu sheegay Hanti-dhowrka Guud, in Shirkadaha Turkiga ee Maamulada Dekada iyo Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ay kasoo horjeesteen in lala xisaabtamo oo la ogaado dhaqaalaha soo gasha iyo mida ka baxda.
” Waa ay diideen in lala xisaabtamo Shirkada Favori iyo Al-Bayrak, waxaa ka dhaa dhacsan shirkadahan in aan lala xisaabtami karin, waxaan idin sheegayaa in wadankan aysan xisaab xirmeyn inta shirkadaha lagu wareejiyay ilaha dhaqaalaha aan kala xisaabtami karin” Ayuu yiri Hanti-Dhorka guud.
Waxa uu ugu baaqay Hanti-dhoorka guud Baarlamaanka Soomaaliya in ay arintan wax ka qabtaan ayna gacan ka geestaan sidii loola xisaabtami lahaa shirkadahan inta aan la gaarin sanadka cusub si loo soo xiro xisaabta sanadkan dhamaanaya ee 2015-ka.
Dowlada Soomaaliya ayaa ku wareejisay Maamulida Garoonka iyo Dekada Magaalada Muqdisho Shirkado laga leeyahay dalka Turkiga, shirkadahan ayaana dhaqaalo badan waxa uu kasoo galaa Dekada iyo Garoonka mana jirto cid si toos ah ula xisaabtanta.